voiceofppl Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "voiceofppl"
မြေသိမ်းခံရမှု နစ်နာမှုအား ဖြေရှင်းပေးဖို့ တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချူပ်ထံသို့ အကူအညီတောင်းခံခြင်း
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ၊ ၂၀၁၆ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ် မြို့နေ ကျမ၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးရှာဖွီသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ မြိတ် တဖက်ကမ်းရှိ ကျွန်းစုမြို့ နယ်ပိုင် သံန္တုတ်ကျေးရွာ အုပ်စု သရင်ကန်းကျေးရွာရှိ ကွင်းအ[Read More…]
December 24, 2016 — ပြည်သူ့အသံ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲမှ သင်္ဃန်းကျွန်း ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံ
ဧပြီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၆ M-Media ပေးပို့သူ- သင်္ဃန်းကျွန်းသား . ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် မြို့နယ်ပေါင်း ၄၅ မြို့နယ်ရှိပါတယ် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၃၈ ရပ်ကွက်ရှိပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ[Read More…]
April 24, 2016 — ရင်ဖွင့်လွှာ
ရိုးသားစွာ ကူညီခဲ့ရာမှ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လုယက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်ခဲ့ရ
ဧပြီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၆ M-Media ယွန်းမီမီမောင် ပေးပို့သည်။ ” နိုင်ငံ ရပ်ခြားသို့အလည်အပတ်သွားသူများ သတိထားဖို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတစ်ပါး အခက်အခဲကို ကူညီချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကူညီခဲ့တာကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ရက်ရက်စက်စက်ပြုမူ သွားတာခံခဲ့ရပါတယ်။ အသက်၇၀ကျော်ရှိပီဖြစ်တဲ့ကျွန်မအဖိုးကို မလေးရှားနိုင်ငံ (ဟိန္ဒူ[Read More…]
April 22, 2016 — ရင်ဖွင့်လွှာ
ဧပြီ ၁၈ ၊ ၂၀၁၆ Dr-ကိုကိုကြီး ရေးသည်။ . ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာပါ ကျွန်တော့်စာရေး စားပွဲပေါ်ကဖုန်းသံမြည်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်ပါတယ်… . ဟယ်လို…ကျွန်တော်ကိုကိုကြီးပါ ဟုတ်ကဲ့….ကျွန်တော် ဆရာဦးမြလွင်ပါ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ ကျောက်တစ်လုံးတောင်[Read More…]
April 18, 2016 — ရင်ဖွင့်လွှာ
ရေးသူ မနှင်းဖြူ ကျွန်တော်ဟာ လူမျိုးစွဲစိတ်ကို မေ့ဖျောက်ထားတဲ့ ကရင်စစ်စစ် တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့် အဘွားဟာ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက အစ အခု အသက်အရွယ်ရတဲ့အထိ အမြဲချည်ထည် အပိုင်းကလေးတွေဆိုရင် လွှင့်မပစ်ဘဲ စောင်ကလေးတွေ၊ ခေါင်းအုံးအဖုံး ကလေးတွေ[Read More…]
March 17, 2016 — ပြည်သူ့အသံ